Uye kwakauya Apple yeKrisimasi kushambadzira | Ndinobva mac
Uye Apple yeKisimusi kushambadzira yakauya
Kupfuura zvishoma maawa mashoma apfuura, Apple yakaburitsa kubheja kwayo kweKisimusi iyi pane yayo YouTube chiteshi, ndiko kuti, iyo vezvokutengeserana yaunoda kuti munhu wese azive mapato anotevera eKisimusi uye yaanoda kupa meseji yake kune aya mazuva anodakadza.
Kushambadzira, sekune dzimwe nguva zhinji, kunoratidza mashandisiro anoita protagonists mashandisiro echishandiso, mune ino iPhone iyo rekodha rwiyo kubva mutambo tambo bhokisi izvo isu tese takanakidzwa pane imwe nguva muhupenyu.
Asi chikamu chinonakidza chekushambadzira hachigumiri ipapo uye ndechekuti protagonist ndiFrankenstein iye, anoshandisa zvakanyanya iPhone 7 kurekodha mimhanzi yetambo tambo yemhanzi yatatotaura.
Vhidhiyo yegore rino yakanzi Zororo raFrankie Uye chishambadziro chakasiyana zvachose kana tikatarisa kumashure toongorora izvo zvemakore apfuura maigara zvichitarisa kune nhengo yemhuri yakashandisa zvishandiso zveApple, kazhinji iPhone yekupa yako Kisimusi meseji kune avo vari padyo newe.
Mune ino kesi, Frankenstein iye ndiye anoshandisa maawa nemaawa achigadzirira kusvika kwake mutaundi kuti agone kuimba rwiyo rweKisimusi kubva mubhokisi rake rakakosha retsambo dzemimhanzi kuvagari veiyo imwechete. Kuti aite izvi, anotonoraira maviri mabara emagetsi online kuti panguva yekuimba anosvinwa mumaburi epurufu mumutsipa wake. Pasina kupokana, zano rakanyatso chenjera iro rinopera neshoko rakanaka kune wese munhu uye ndizvo paKisimusi ngativhurei moyo yedu kune wese munhu, «Vhura moyo wako kune wese munhu»
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Uye Apple yeKisimusi kushambadzira yakauya
Apple's AirPort mainjiniya timu inopararira
Kutamba yengano Dambudziko paMacBook Pro Kubata Bhara zvinogoneka